ULuis Cernuda. Isikhumbuzo sokufa kwakhe. 4 izinkondlo | Izincwadi Zamanje
ULuis Cernuda. Isikhumbuzo sokufa kwakhe. 4 izinkondlo
ULuis Cernuda ushone ngoNovemba 5, 1963 eDolobheni lase I-México. ngazalwa Sevilla futhi kwaba enye yezimbongi ezibaluleke kakhulu ze- Isizukulwane sama-27. Namuhla ngiyamkhumbula ebuyekeza isimo sakhe nomsebenzi wakhe futhi egqamisa 4 izinkondlo zakhe.
1 ULuis Cernuda
2.1 Amagquma othando
2.2 Isizathu sezinyembezi
2.3 Ngingathanda ukuba ngedwa eningizimu
2.4 Lapho kuhlala khona ukukhohlwa
Wayefundela umuntu wakubo UGustavo Adolfo Becquer lapho waba nentshisekelo yezinkondlo esemncane. Kakade esemusha wenza izincwadi zakhe zokuqala ngo I-Western Magazine futhi wabambisana ku Iqiniso, Emini o Litoral, umagazini waseMalaga UManuel Altolaguirre. Ube kade ithonywe kakhulu yizincwadi zaseFrance, khumbula ukuthi omunye kagogo nomkhulu wakhe wayengumFulentshi. Empini Yombango waya ekudingisweni e-United States, lapho asebenza khona njengothisha, kwathi kamuva waya eMexico, lapho afela khona.
Sus izinkondlo zokuqala zanyatheliswa ngo-1927 ngaphansi kwesihloko esithi Iphrofayili yomoya. Esigabeni sayo se- ubusha sinakho Umfula, uthando y Ubumnandi obenqatshelwe, eziveza ukunamathela kwazo ku- ukuziphendulela. Ku- ukuvuthwa Phuma Amafu, mayelana neMpi Yombango. Kwakhe isigaba sokugcina, esivele iseMexico, ifaka phakathi Ukwehluka kutimu yaseMexico, Phila ngaphandle kokuphila y Ngamahora abaliwe.
kufingqa lokho kulangazelela okuluhlaza okwenyuka
ezinkanyezini zesikhathi esizayo,
senziwe isikali segagasi
lapho izinyawo zaphezulu zehlela kwalasha,
nefomu lakho uqobo,
ingelosi, idemoni, iphupho lothando oluphuphile,
ufingqa kimi ukulangazelela okwake kwaphakama
kuze kube semafwini amagagasi alo ancibilikayo.
Ngisazizwa ngomsindo wokulangazelela lokho,
Mina, othandwa kakhulu,
ngaphandle kwesibani esingibonayo
nakanjani ufile noma uyaphila,
Ngicabanga ngamagagasi awo futhi ngithanda ukukhukhula,
yehla, njengezingelosi labo abaphansi kwesitebhisi se-foam,
ekujuleni kothando olufanayo olungakaze lubonwe yindoda.
Ubusuku bokuba lusizi abunamkhawulo.
Umthunzi wakhe ekuhlubukeni njengogwebu,
bhidliza izindonga ezibuthakathaka
ubusuku obungeke bube ngenye into ngaphandle kobusuku.
Ngabe abathandi bashaya izinkanyezi
mhlawumbe i-adventure icima ukudabuka.
Kepha wena, ubusuku, uqhutshwa izifiso
ngisho nokukhanya kwamanzi,
uhlala umile ulindile owaziyo ukuthi iziphi izinhlungu zasebusuku.
Ngale kwalasha kuyathuthumela
enezinyoka phakathi kwezimpaphe,
angabheki okunye ngaphandle kobusuku
lapho bevala umoya phakathi kwezindebe zabo.
Ubusuku, ubusuku obukhazimulayo,
ukuthi eduze kwamakhona kusonta ukhalo lwakhe,
ukulinda, kwazi bani,
njengami, njengawo wonke umuntu.
Ngingathanda ukuba ngedwa eningizimu
Mhlawumbe amehlo ami ahamba kancane ngeke esabona eningizimu
yamathafa akhanyayo alele emoyeni,
ngemizimba emthunzini wamagatsha njengezimbali
noma abaleke ngokugabavula kwamahhashi athukuthele.
INingizimu iyihlane elikhala ngenkathi kuculwa,
futhi lelozwi alicinywanga njengenyoni efile;
ulwandle uqondisa izifiso zakhe ezibabayo
kuvula i-echo ebuthakathaka ehlala kancane.
Eningizimu ekude kangaka ngifuna ukudideka.
Imvula ayikho enye into ngaphandle kwe rose evulekile;
inkungu yayo iyahleka, uhleko olumhlophe emoyeni.
Ubumnyama bawo, ukukhanya kwawo kungubuhle obulinganayo.
Lapho kuhlala khona ukukhohlwa
Lapho kuhlala khona ukungakhohlwa,
Ezingadini ezinkulu ngaphandle kokuntwela kokusa;
Lapho ngikhona nje
Inkumbulo yetshe eligqitshwe phakathi kwezimbabazane
Lapho umoya uphunyuka khona ukuqwasha.
Lapho igama lami lihamba khona
Emzimbeni oqokiwe ezingalweni zamakhulu eminyaka,
Lapho isifiso singekho.
Kuleso sifunda esikhulu lapho uthando, ingelosi esabekayo,
Iphiko lakhe esifubeni sami,
Ukumomotheka okugcwele umusa wasemoyeni njengoba ukuhlushwa kukhula.
Lapho kuhlala khona lokhu kulangazelela okufunwa ngumnikazi ngomfanekiso wakhe,
Ukuhambisa impilo yakhe kwenye impilo,
Awukho omunye umkhathizwe ngaphandle kokubheka amehlo.
Lapho usizi nenjabulo kungadluli nje amagama,
Izulu lomdabu nomhlaba okuzungeze inkumbulo;
Lapho ngikhululekile ekugcineni ngingazi mina,
Incibilikiswe yinkungu, ukungabikho,
Ukungabikho kancane njengenyama yengane.
Lapho, lapho kude;
Lapho kuhlala khona ukukhohlwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Izinkondlo » ULuis Cernuda. Isikhumbuzo sokufa kwakhe. 4 izinkondlo
Ukukhethwa Okuhle Kwezincwadi Zothando: Kusuka e-Austen kuye e-Esquivel
Izincwadi zikaVirginia Woolf